Shirkadda Maraakiibta ganacsiga Djibouti oo ka hawlgalaysa Muqdisho “Sawirro” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Shirkadda Maraakiibta ganacsiga Djibouti oo ka hawlgalaysa Muqdisho “Sawirro”
Muqdisho (ISONNA)-Daahfurka shirakadda maraakiibta ganacsiga Djibouti oo maanta markabkii ugu horeeyey oo shirkaas u rarnaa ku soo xirtay dekada Muqdisho ayaa si toos ah uga hawl bilowday Soomaaliya.
Maxamed Cabdixaliim wakiilka shirkadda oo ka hadlay munaasabad gudaha dekadda Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegay in shirkadooda 14-maalin oo keli ah ay kaga keeni doonto xamuulka dalka Turkiga, halka shirakadaha kale safarkoodu uu yahay ugu yeraan 45 cisho.
Farhat Akkat oo ah maamulaha shirkadda Albeyrak ee dekadda Muqdisho maamusha ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan shirkadda cusub ee qaabilsan daabulidda shixnadaha ganacsiga, ee sida tooska ah isugu xireysa Soomaaliya iyo Turkiga.
Sii hayeyaasha Wasiirada ganacsiga, Maaliyadda iyo mas’uuliyiinta rugta ganacsiga oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ay tani bilow cusub u tahay ganacsiga Soomaaliya iyo dalalka kale, ee Turkigu ka mid yahay, maadaama shirkaddii ugu horeysay oo toos alaabaha ganacsiga uga keeneyso maanta ay suurtagashay.
Sii hayaha Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac ayaa sheegtay inay u mahadcelinayso ganacsatadii suurtagelisay shirkaddan inay dalka ka hawlgasho.
Munaasabadda waxaa ka qeybgalay, wasiiro ka tirsan Xukuumaddii hore, Xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, mas’uuliyiin ka tirsan safaaradda Djibouti ee Soomaaliya iyo xubno kale, kuwaasi oo soo dhaweeyay shirkaddan cusub.
Markabka African Sun ayaa labadii bishan ka soo baxay marsada Istanbul, kaas oo u raran shirkadda laga leeyahay Djibouti, taas oo si toos ah alaabaha ganacsiga uga keeni doonta dalka Turkiga, halka markii hore la soo mari jirey meelo kale oo ay kamid tahay dekadda Dubai.
Previous articleWaxqabadka Taliska Ciidanka Asluubta oo lagu maamuusay Muqdisho
Next articleMadaxweynaha JFS “Si aan shisheeye inoo soo faragelin,waa in aan annagu leenahay go’aanka arrimaheena”+sawirro